About Me – The Well Finisher
A Brief Autobiography of Myself
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်တော် ဆရာမောင်ခိုင်ပါ။
The Well Finisher Customized English Course ရဲ့ပင်တိုင် သင်ကြားပို့ချသူ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာ အပါအဝင် ဘဝမှာ သင်ယူမှတ်သား တတ်မြောက် လာခဲ့သမျှကို သမရိုးကျ နည်းလမ်းကနေ ခွဲထွက်ပြီး ဘဝရဲ့ အနိမ့်အမြင့်တွေကနေ တကယ်တွေ့ကြုံခံစားပြီး သင်ယူခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ပို့ချချက်တိုင်းကို ယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်နဲ့ သင်ပြပို့ချပေးပါတယ်။
အသေအချာ ပြောရဲတာတခုကတော့ အကုန်သိ၊ အကုန်တတ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ သိသလောက် တတ်သလောက်ကို ကောင်းကောင်းသိ၊ ကောင်းကောင်းတတ်အောင် ကြိုးစား။ လက်တွေ့အလုပ်ဖြစ်လောက်တဲ့ အတိုင်းအတာတခုအထိ ဂဃနဏ ရှင်းလင်းသေချာအောင် တတ်ရင်လုံလောက်ပါပြီ။ လက်မှတ်ပေါ်မှာတတ်ပြီး လက်တွေ့မှာ မတတ်ရင် ဒါဟာ အရှက်ရစရာပဲ။ ဘယ်တော့မှ ပညာဂုဏ်ပုဒ် အကြွေးမတင်စေနဲ့။
ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဘဝတခုရဲ့ အစ
၁၉၇၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၇)ရက် [အဖေကတော့ မတ်လ (၃၀)ရက်လို့ဆို]၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးမြို့နယ်၊ ကံဦးကျေးရွာမှာ ကျွန်တော် မွေးဖွါးခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ကျတဲ့အထိ အဲဒီရွာကလေးမှာပဲ ကြီးပြင်းလာခဲ့ပါတယ်။
ဘဝပေးကြမ်းတမ်းလွန်းတာကြောင့် ၆တန်းတက်နေတုန်း အိမ်ကနေ ထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ ကြီးပွါးတိုက်တက်အောင် အလုပ်လုပ်တော့မယ် ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ပါ။ ကျောင်းအပြီးတိုင် ထွက်ခဲ့ရတာသာ အဖတ်တင်ပြီး စိတ်ကူးထဲက ဘဝကတော့ မရခဲ့ပါဘူး။ နွေးထွေးတဲ့ မိဘရင်ခွင်ကို လွမ်းလွန်းလို့ ညများစွာငိုကြွေးရင်း (၁၀)လအကြာမှာ လက်ချည်းဗလာနဲ့ အိမ်ပြန်ရောက်လာ ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၉၄ ခုနှစ်ကနေစပြီး အလုပ်ကြမ်းမျိုးစုံ လုပ်ကိုင် ခဲ့ပါတယ်။ လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ရိုးရာတောင်ယာလုပ်ငန်း၊ သစ်ဝါးခုတ်.. အလုပ်မျိုးစုံပါပဲ။ လုပ်လိုက်ရတဲ့အလုပ် အစားတလုတ်အတွက် – ဝမ်းတထွာ ဖြည့်ဖို့ သက်သက်ပါ။
ဘဝကို လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့တဲ့ ညတညကို အခုထိ မှတ်မိနေဆဲပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြောနေခဲ့တာကတော့ .. ငါဘဝကို ဒီအတိုင်း ရှေ့ဆက်မသွားနိုင်ဘူး – အစားတလုတ်အတွက် တခုတည်းနဲ့ ရွှံ့နွံထဲ ရုန်းနေရတာ..။ အဲဒါ ၁၉၉၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ လယ်တောထဲ ဖားအော်သံတွေ ညံနေတဲ့ ညတညမှာပါ။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးတပါးဖြစ်တဲ့ အရှင်သုမဏ (BA) ပြုစုတဲ့ နည်းသစ် အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါစာအုပ်ကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် လေ့လာသင်ယူ ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါစာအုပ်ထဲက သင်ခန်းစာနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေရဲ့ ၇၅% လောက်ကို ကျေညက် တတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ လေ့လာမှု၊ ကြိုးစားခဲ့ရသမျှရဲ့ ရလဒ်ကတော့ ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဇိုခရစ်ယာန်ဓမ္မကောလိပ် ဝင်ခွင့်ကို အောင်အောင်မြင်မြင် ဖြေဆိုနိုင်စေခဲ့ပါတယ်။
ရွာကဦးလေးကြီး တယောက်ဆီက ကြားခဲ့ဖူးတဲ့ စာကားပုံတခုရှိတယ် – “အလျင်လို လမ်းကသွား” တဲ့။ ဟုတ်တာပေါ့။ အတိမ်းအစောင်း မခံတဲ့ အခြေအနေမှာ သေချာတဲ့လမ်းကိုပဲ လိုက်သင့်ပါတယ်။ ဖြတ်လမ်း မလိုက်သင့်ပါ။
ကျွန်တော့်အသက် (၃၀)ကျမှ ကွန်ပျူတာလက်ကွက်ကို စထိခဲ့ရတာပါ။ စာတပုဒ်ကို စီဒီပြားထဲ သိမ်းဖို့တောင် မလွယ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီကနေ့မှာတော့ ကျွန်တော်ဟာ Data Entry ကနေစပြီး Content Writer, Functional Tester, Content Manager, WordPress Designer စသည်စသည်ဖြင့်..
ကျွန်တော်နားလည်တဲ့ ပညာဆည်းပူးခြင်း ဆိုတာ..
အတန်းပညာကို ပုံမှန်စာသင်ကျောင်းကနေ သင်ကြားဖို့ အခွင့်အရေး မရှိခဲ့သူတယောက် အနေနဲ့ နန်းတော်ထဲက ဘုရင့်ပွဲတော်တည်တဲ့ နေရာမှာ စားခွင့်မရသည့်တိုင် ဒါကိုစိတ်ပျက်အားငယ်ပြီး ငုတ်တုတ်ထိုင်ငိုနေရုံနဲ့တော့ ဗိုက်ပြည့်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်နေတဲ့ တဲအိမ်လေးထဲမှာပဲ ကိုယ့်ပညာဝမ်းတထွာပြည့်ဖို့ မဖြစ်မနေ၊ မရမက ရှိတာလေးကို ချက်ပြုတ်စားသောက် ရမှာပါပဲ။ စားကောင်းခြင်း မစားရလို့ အငတ်ခံသေမလား၊ ဒါမှမဟုတ် ရှိတာကိုစား အသက်ဆက်မလား – ဘာကိုရွေးမလဲ။
Book ဆိုတာ စာအုပ်လို့ သိထားရင် ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲ သိလာသိလာ တရားမဝင်ဘူး၊ ပြောဆိုသုံးနှုံးခွင့်မရှိဘူး ဆိုတာမရှိပါဘူး။ သိတာဟာ သိတာပါပဲ။ Book ဆိုတာ စာအုပ်ပါပဲ၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ စာအုပ်ပါ။ ပိုကောင်းတာက တတ်ပြီးသား သိပြီးသားကို မတတ်ချင် မသိချင်လို့တောင် မရတော့တာပါ။ အဲ့ဒါကြောင့် Book ဆိုတာ စာအုပ်ဖြစ်မှန်းသိဖို့ ရင်းနှီးရတဲ့ အချိန်နဲ့ကြိုးစားမှုက အားကြီးတန်နေပါသေးတယ်။
ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ် – သိပြီဆိုရင် သိတာပဲ၊ တတ်ပြီဆိုရင် တတ်တာပဲ။ သိသလောက် တတ်သလောက်ကို ကောင်းကောင်းသိ ကောင်းကောင်းတတ် ဖို့ကသာ အဓိက။ ဘယ်လောက်များများ သိသလဲ၊ တတ်သလဲ ဆိုတာ အရေးကြီးသလောက် ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း သိသလဲ၊ တတ်သလဲ ဆိုတာကလည်း ထပ်တူ အရေးပါလှ ပါတယ်။ ဘယ်လိုပုံ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ သိလာတာ တတ်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်။ ကြိုးစား အားထုတ်မှု တိုင်းက အသိအမှတ်ပြုမှုနဲ့ ထိုက်တန်တယ်၊ ဒါကျွန်တော့်ရဲ့ ခံယူချက်။
ဇိုခရစ်ယာန်ဓမ္မကောလိပ်မှာ (၄)နှစ်တာ ဒီပလိုမာတန်းကို ပညာရည်ချွန်ဆု ဆွတ်ခူးပြီး အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကနေ မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံး ခရစ်ယာန် ကျမ်းစာကျောင်းလို့ ပြောလို့ရတဲ့ Seminari Theoloji Malaysia မှာ သာသနာရေးရာမဟာတန်း (Master of Ministry) ကို ဆက်တက်ခဲ့ပါတယ်။ မူလခရက်ဒစ် နာရီ (၃၀)နှင့် ယူရတဲ့ ဘွဲ့လွန်တန်းကို ဒီပလိုမာကနေ တန်းခုန်တဲ့အတွက် ဖြည့်စွက်နာရီ (၃၀)နဲ့ တနှစ်စာကို ကိုယ်ကနှစ်နှစ်နဲ့ လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ post-graduate level အတွက် graduate level မေဂျာတချို့ မကျန်ခဲ့ဖို့ပါ။
မဟာတန်းပြီးတဲ့ အချိန်မှာ သင်ယူခဲ့ရတဲ့ သင်ခန်းစာတွေအပြင် အကြောင်းအရာနှစ်ခုကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိနားလည် လာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့၊
(၁) ငါမသိတာ အများကြီးပါလား ဆိုတာကို ကောင်းကောင်းသိနားလည်လာပြီး၊
(၂) မသိတာကို မသိဘူးလို့ ပြောရဲတဲ့ သတ္တိရှိလာပါတယ်။
Zo Christian College (2004-2008)
Seminari Theoloji Malaysia (2008-2010)
ဘဝမှာ အခကြေးငွေနဲ့ ပထမဆုံး စလုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်ကတော့ ကလေး-တမူးကားလမ်း ကျွန်တော်တို့ရွာအပိုင်းမှာ လမ်းပေါက် ချိုင့်ခွက်တွေကို သဲ၊ မြေစာ စတာတွေနဲ့ ဖြည့်၊ ဖို့၊ ဖာထေးရတဲ့ အရင်အခေါ် ပလက အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ် အသက် (၁၃)နှစ် အရွယ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တနေ့လုပ်အားခကတော့ (၂၅)ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးအရွယ်မှာ ဘာလို့ဒီအလုပ်ကို လုပ်ခဲ့တာလဲဆိုတာ .. ဒီလိုပါ။ ၄တန်းအောင်ပြီး ၅တန်းတက်ဖို့ကို ရွာကနေ ၈မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ စခန်းကြီးရွာမှာ သွားတက်ဖို့ မတတ်နိုင်ခဲ့လို့ (စက်ဘီးလေးတစ်စီး ရှိခဲ့ရင်ကို အဆင်ပြေပါတယ်) တစ်နှစ် ကျောင်းနားခဲ့ရချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်နှစ်မှာ မိဘများက အကျောက်အကန် ကြိုးစားပေးလို့ ပဉ္စမတန်းကို တက်ခွင့်ရခဲ့ပြီး တခန်းလုံးပထမနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ၅တန်းဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အတန်းပညာ အမြင့်ဆုံး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အိမ်းပြေး၊ ကျောင်းပြေးဘဝ ယောင်လည်လည်နဲ့ မေမြို့ ရပ်ကွက်ကြီး (၆) က လ္ဘက်ရည်ဆိုင်တဆိုင်မှာ စားပွဲထိုးလုပ်ခဲ့ပြီး ဖျော်ဆရာအဖြစ်နဲ့ ပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းပညာရေးနဲ့ တသက်တာ ဝေးခဲ့ရတာကတော့ အိမ်အပြန် လက်ဆောင်ပေါ့။
လူပျိုပေါက်စ သူရင်းငှါးဘဝနဲ့ နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်း သုံးရာသီမှာ တနင်္ဂနွေဘုရားကျောင်း တက်တဲ့နေ့မျိုးကလွဲရင် သီးသန့်နားရက် မရှိပါဘူး။ အလုပ်အကိုင်ကို ဖော်ပြပါဆိုရင်တော့ – ရရစားစား တောင်သူအလုပ် လို့ဆိုရမှာပါ။
ဝဥတူး၊ သစ်ခွပန်းရှာ၊ ကိုင်းခုတ်၊ သစ်တောင်ပတ်ခုတ်၊ ထင်းခွေ၊ ငါးရှာ၊ ရေမြောင်းတူး၊ အုတ်ထင်းခွေ၊ ရိုးရာမပျက် တောင်ယာခုတ်၊ တောရိုင်းရှင်း၊ သစ်ငုတ်ကလော်၊ မျှစ်ရှာ.. လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကို CV ဖောင်မှာ ဖြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ .. ရှိသေးတယ်။
တိရစ္ဆာန်ဆေးခန်း တခုမှာ သန့်ရှင်းရေးသမားအဖြစ် အလုပ်လုပ်ခဲ့ ပါသေး တယ်။ ခွဲစိတ်ကြိယာ တွေကို ပေါင်းအိုးနဲ့ပေါင်းတာကလွဲရင် ကျန်တာက ရှိရှိသမျှ အညစ်အကြေး တွေကို ဆေးကြော သန့်ရှင်း ရတာပါ။ အလုပ် ဟူသမျှ ဂုဏ်ရှိစွလို့ ဆိုထားတယ် မဟုတ်ပါလား။
Table Tennis နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းတဲ့ ကုမ္ပဏီတခုမှာ Data Entry Clerk အဖြစ် အလုပ်လုပ်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ Microsoft Word, Excel, Processing Order, Consignment Note, SQL, Inventory စတဲ့ ဝေါဟာရတွေနဲ့ ရင်းနှီးခဲ့တာ အမြတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သင်ယူတတ်ရင် လုပ်ငန်းခွင်ဟာ ကျောင်းပါပဲ။
နောက်တော့ Industrial Supplies ကုမ္ပဏီတခုရဲ့ ebay, amazon နှင့် ကုမ္ပဏီပိုင် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်မှာ ပစ္စည်းတင်ရောင်းတာကို ကိုင်တွယ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ .. မသိလိုက်မသိဖာသာနဲ့ မိသားစု စားဝတ်နေရေးကို ဖြေရှင်းနေရင်း – လုပ်ရင်းသင်ရင်း ..။
It’s not difficult to start off but to go on, even more so to finish well. Be “The Well Finisher”.
အစပြုရန် မခက်ပါ၊ ရှေ့ဆက်ဖို့ရန်သာ ခက်ပါသည်၊ ကောင်းစွာအဆုံးသတ်ရန်မှာ ပို၍ခက်ချေသည်။ ကောင်းစွာအဆုံးသတ်သူ ဖြစ်ပါစေ။
Chin Evangel Centenary Gospel Team နိုးကြားရေးအဖွဲ့မှာ စတင်ပါဝင် အမှုတော် ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၇ ဒီဇင်ဘာလ တလတာ သင်တန်းအပြီးမှာ ချင်းပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ နှင့်ရန်ကုန်အထိ နှစ်ခြင်းအသင်းတော်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ကို နယ်လှည့်ခဲ့ပါတယ်။
Centenary Mission Training School (CMTS) မှာ သာသနာပြု အထူးသင်တန်း (၅)လတာ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သင်တန်းကို အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့ပြီး ဧရာဝတီတိုင်း သာသနာကွင်းသို့ စေလွတ်ရန် ရွေးချယ်ခံခဲ့ပါတယ်။
ဧရာဝတီတိုင်း၊ မြန်အောင်မြို့နယ်ထဲက ရွာတရွာကို အမှုတော်ဆောင်ဖို့ စေလွတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ အဓိကအလုပ်က ရှိနှင့်ပြီး တပည့်တော်စုကို ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့နှင့် မယုံကြည်သေးသူများကို ဧဝံဂေလိဝေငှဖို့ ဖြစ်ပြီး သုံးနှစ်တာမျှ ကြိုးစာလျက်၊ မျက်ရည်ကျလျက် အမှုတောင်ဆောင် ခဲ့ပါတယ်။ (၁ကော၊ ၃း၆)
ခမ်းပတ်မြို့ ဇိုနှစ်ခြင်း အသင်းတော်မှာ သင်းအုပ်ဆရာတော်ကို ကူညီထောက်မ အမှုဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ အသင်းတော်မှာ လက်တွေ့အမှုတော်ဆောင်ခွင့် ရခဲ့တာ တကယ့်အခွင့်ထူး ဖြစ်ခဲ့ပြီး လူငယ်များနှင့်လက်တွဲပြီး မြင်သာတဲ့ ရလဒ်တချို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
CPT တွင် အမှုတော်ဆောင်ခြင်း
Seminari Theoloji Malaysia မှာ ကျောင်းတက်နေစဉ်အတွင်း မြန်မာယုံကြည်သူ တချို့မှ Cross Power Tabernacle တွင် ၎င်းတို့ထံ သင်းအုပ် အမှုတော် ထမ်းဆောင်ပေးပါရန် တောင်းဆိုတာကို လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ စစ်သူကြီးကဲ့သို့သော အမှုတော်ဆောင် ဆရာကြီး Rev. Moses Tan Hoe Son ဦးဆောင်လမ်းပြမှုအောက်တွင် အမှုတော်ဆောင်ခွင့် ရခဲ့တာဟာ တကယ့်အခွင့်ထူး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ လမ်းပြမှုနှင့် သွန်သင်မှုတို့အတွက် သူ့ကို အမြဲပဲ ကျေးဇူးတင်လျက်ပါ။
HPA တွင် အမှုတော်ဆောင်ခြင်း
Jul 2011 - 2022
ကျမ်းစာကျောင်းမှ ဘွဲ့ရပြီးနောက် ဆူဘန်းမြို့ကို ပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၁ ဇူလိုင်လမှာ Taipan ကနေ USJ9က Hosanna Praise Assembly ဘုရားကျောင်းကို ပြောင်းရွှေ့လာ ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီ အသင်းတော်ရဲ့ သင်းအုပ်ဆရာကြီး Rev. Dr. Bernard Ong မှ ကျွန်တော်တို့ကို လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဖခင်ကဲ့သို့သော အမှုတော်ဆောင် ဆရာကြီးရဲ့ လမ်းပြသွန်သင်မှု အောက်မှာ အမှုတော်ထမ်းဆောင်ခွင့် ရခဲ့လို့ ကောင်းကြီးခံစား ခဲ့ရပါတယ်။
Subang Zo Baptist Church
သာသနာ့ လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ အသင်းတော်ရေးရာ အရပ်ရပ်၌ မြန်မာပြည် မိခင်နယ်အဖွဲ့ ဖြစ်တဲ့ ဇိုနှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန် နယ်အဖွဲ့နဲ့ တရားဝင် ဆက်သွယ် လက်တွဲ လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရန် ရည်ရွယ်၍ ယခင် အသင်းတော်ရဲ့ ရပ်တည်သင်းဖွဲ့မှုနဲ့ အမည်သမုတ်ရာမှာ ခရစ်ယာန် မိဿဟာရ သင်းဖွဲ့မှု ပုံစံနဲ့ ရှိနေခဲ့ရာကနေ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့မှာ နှစ်ခြင်းအသင်းတော် အဖြစ် ပြေင်းလဲပြင်ဆင် ရပ်တည်ခဲ့ ပါတယ်။